Dowlada oo soo sartay 5 bilyan oo shilin oo lagula tacaalayo abaaraha ku dhufay qaar ka mid ah degaanada dalka – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada oo soo sartay 5 bilyan oo shilin oo lagula tacaalayo abaaraha ku dhufay qaar ka mid ah degaanada dalka
Star FM October 30, 2016
Wasiirka wasaarada dowlad wadajinta iyo qorsheynta Mwangi Kiunjuri ayaa sheegay in dowlada ay soo saartay lacag dhan 5 bilyan oo shilin oo looga gol leeyahay in lagula tacaalo saameynta ka dhalatay abaaraha ku dhuftay qaar ka mid ah degaanada dalka.
1.2 bilyan oo shilin oo lacagtan ka mid ah ayaa loo isticmaali doona in xoola dhaqatada loogu iibiyo xoolahooda abaaraha ku nafwayay.
Mr Kiunjuri ayaa hadalkan jeediyay isaga oo ku sugan countiga Samburu oo ka mid ah maamul goboleedyada abaaraha saameyeen.
Waxaa booqashadan wasiirka ku wehelinayay xildhibaanada xubnaha ka ah gudiga beeraha ee baarlamaanka oo loo xil saaray in ay ku soo waregaan dalka si loo soo indhaindheyo sida ay tahay xaalada degaanada ay dhibata ka soo gaartay abaarta.
Dadka ku dhaqan countiga Samburu ayaa cuno la gaarsiiyay halka gudiga booqashada ku tagayna laga sugaya in ay baarlamaanka warbixin arrintan ku aadan hor geyaan.
Dhanka kale Mr Kiunjuri ayaa ka dhawajiyay in macluumadka laga helayo waaxyaha kala duwan ee dowlada y muujinayaan in boqolkiba 10 ee xoolaha ku dhaqan dalka ay saameyn soo gaartay halka qaar ka mid ahna biyo la’aan iyo cuno yari awgeed ay u dhinteen.
Ugu dambeyntina wasiirka dowlad wadaajinta iyo qorsheynta qaran ayaa jeediyay digniin ku aadan in sarakiisha gacanta lagu dhigo iyaga oo iibinayo cunada gargaarka ah maxkamada la geynayo shaqadana laga tirayo.
← Boqolaal qof oo ku xanibmay Likoni kadib markii ay ciladowday mid ka mid ah doomaha Ferry-da
Ururrada rayidka oo ku baaqay in xoghayaha wasaarada caafimadka Dr. Nicholas Muraguri uu iscasilo →